New Oriental သည် ၂၀ ၂၂ ဘဏ္ fiscal ာရေး နှစ်အတွက် H1 ဒေါ်လာ ၈ ၇၆ သန်း အရှုံးပေါ် ကြောင်းဖော်ပြ သည် - Pandaily
(Source: Hongxing News)
New Oriental သည် ၂၀ ၂၂ ဘဏ္ fiscal ာရေး နှစ်အတွက် H1 ဒေါ်လာ ၈ ၇၆ သန်း အရှုံးပေါ် ကြောင်းဖော်ပြ သည်
Feb 23, 2022, 12:52ညနေ 2022/02/23 14:01:33 Pandaily
တရုတ် ပုဂ္ဂလိက ပညာရေးနှင့် လေ့ကျင့်ရေး ကုမ္ပဏီ New Oriental က အင်္ဂါနေ့ ညနေပိုင်းတွင် ကြေငြာ ခဲ့သည်၂၀၂၁-၂၀ ၂၂ ဘဏ္ fiscal ာရေး နှစ် ပထမနှစ်ဝက် ဘဏ္ financial ာရေး အစီရင်ခံစာအစီရင်ခံစာ ကာလအတွင်း New Oriental သည် ဝင်ငွေ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁. ၉ ၆၇ ဘီလီယံ ရရှိခဲ့ပြီး ပြီးခဲ့သည့်နှစ် အလားတူ ကာလက အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁. ၈ ၇၄ ဘီလီယံ ရှိခဲ့သည်။ အသားတင် အရှုံး မှာဒေါ်လာ ၈ ၇၆ သန်း ဖြစ်ပြီး ပြီးခဲ့သည့်နှစ် အလားတူ ကာလက အသားတင် အမြတ် မှာဒေါ်လာ ၂ ၂၉ သန်း ဖြစ်သည်။ ဘဏ္ data ာရေး အချက်အလက်များအရ New Oriental ၏လက်ရှိ ငွေ နှင့် ငွေ နှင့်ညီမျှ သည်အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁. ၀ ၂၇ ဘီလီယံ ရှိသည်။
ထို့အပြင် ဘဏ္ report ာရေး အစီရင်ခံစာအရ ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ နို ၀ င်ဘာလ ၃၀ ရက်နေ့တွင် New Oriental ၏နှစ် ဝက် လည်ပတ်မှု ကုန်ကျစရိတ် နှင့် စီမံခန့်ခွဲမှု စရိတ် များသည် ယမန်နှစ် အလားတူကာလ က အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁. ၇၅ ၅ ဘီလီယံ နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၂. ၇ ဘီလီယံ ရှိခဲ့သည်။ ၎င်းတို့အနက် ကုမ္ပဏီ၏ နှစ်ဝက် အထွေထွေ နှင့် စီမံခန့်ခွဲမှု အသုံးစရိတ် သည်အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁. ၂ ၉၂ ဘီလီယံ ရှိခဲ့ပြီး ယမန်နှစ် အလားတူ ကာလက အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၅ ၈၇ သန်း ရှိခဲ့သည်။
“အထွေထွေ နှင့် အုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာ အသုံးစရိတ် များ” ဆိုသည်မှာ ရုံးခန်း ငှားရမ်း ခ၊ အသုံးအဆောင် နှင့် ပစ္စည်းကိရိယာများ တန်ဖိုး လျော့ ခြင်းကို ဆိုလိုသည်။ ၂၀ ၂၂ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလတွင် New Oriental တည်ထောင်သူ Yu Minghong က ပြီးခဲ့သည့်နှစ်က ကုမ္ပဏီ၏ စျေးကွက် တန်ဖိုး ၉၀% ကျဆင်းခဲ့ပြီး လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှု ၀ င်ငွေသည် ၈၀% ကျဆင်းခဲ့ပြီး ၆၀, ၀၀၀ ကို အလုပ် မှ ထုတ်ပယ် ခြင်း၊ ကျူရှင် ပြန် အမ်း ခြင်း၊ ၀ န်ထမ်းများ ရပ်စဲ ခြင်းနှင့် သင်ကြားရေး နေရာ ငှားရမ်းခ များ ပြန် အမ်း ခြင်းစသည့် ငွေသား ကုန်ကျစရိတ် များ သည်ယွမ် ဘီလီယံ ၂၀ နီးပါး (အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၃. ၁၆ ဘီလီယံ) ဖြစ်ကြောင်း ထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့သည်။
၂၀၂၀ နှင့် ၂၀၂၁ ဘဏ္ fiscal ာရေး နှစ်တွင် New Oriental Online K12 ပညာရေး စီးပွားရေး လုပ်ငန်းမှ ၀ င်ငွေ သည်ယွမ် ၂၉၅ သန်းနှင့် ယွမ် ၇ ၈၇ သန်း အသီးသီး ရှိခဲ့ပြီး ကုမ္ပဏီ၏ ဌာနခွဲ များ ၏စုစုပေါင်း ဝင်ငွေ မှာယွမ် ၁. ၀ ၈၁ ဘီလီယံ နှင့် ယွမ် ၁. ၄ ၁၉ ဘီလီယံ အသီးသီးရှိသည်။ လွန်ခဲ့သော ဘဏ္ fiscal ာရေး နှစ် ၂ နှစ်အတွင်း K9 စီးပွားရေး သည် K12 ဌာန၏ ၅၈% မှ ၇၃% အထိ ရှိသည်ဟု ကုမ္ပဏီ ကပြောကြားခဲ့သည်။
New Oriental မှ အစီရင်ခံ သည်မှာ လေ့ကျင့်ရေး စင်တာ များအားလုံးသည် K9 ဘာသာရပ် နှင့်သက်ဆိုင်သည့် ၀ န်ဆောင်မှုများကို ရပ်ဆိုင်း ထားသည်။ ၎င်းသည် ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ နို ၀ င်ဘာလ ၃၀ ရက်ကုန်ဆုံး သည့် ခြောက်လ အတွက် ကုမ္ပဏီ ၏စုစုပေါင်း ၀ င်ငွေ အပေါ် သိသိသာသာ ဆိုးကျိုး သက်ရောက် ခဲ့သည်။
New Oriental ၏တရားဝင် ဝက်ဘ်ဆိုက် ကဖော်ပြ သည်မှာ ၎င်း၏အဓိက စီးပွားရေး လုပ်ငန်းကို အပိုင်း (၃) ပိုင်း ခွဲခြားထားသည်-ကောလိပ် စာမေး ပွဲများ (အဆင့် ၄ နှင့် ၆ စာမေးပွဲ များနှင့် ဘွဲ့ လွန် ဝင်ခွင့် စာမေးပွဲ များအပါအ ၀ င်) ၊ နိုင်ငံတကာ ပညာရေးနှင့် အထွေထွေ အင်္ဂလိပ်စာ သင်တန်း များ။ New Oriental သည်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လေ့လာရေး ခရီးစဉ် များ၊ မိသားစု ပညာရေးနှင့် စာအုပ် များကဲ့သို့သော အသစ် တီထွင်ထားသော ၀ န်ဆောင်မှု များကိုလည်း ပေးသည်။ လက်ရှိ တွင်ဤ စီးပွားရေးလုပ်ငန်း သစ် များသည် ဘဏ္ report ာရေး အစီရင်ခံစာတွင် ထင်ဟပ် ခြင်းမရှိသေးပါ။
ဒါ့အပြင် ကြည့် ပါ:New Oriental Education သည် တိုက်ရိုက် စီးပွားရေး လုပ်ငန်းကို တရားဝင် ၀ င်ရောက် သည်
New Oriental Online သည်ဟောင်ကောင် စာရင်းဝင် ကုမ္ပဏီများ ကိုအဓိက အဖွဲ့ အဖြစ်ယူမှတ် ပြီး “Oriental Zhenxuan” တိုက်ရိုက် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး ပလက်ဖောင်း ကို တည်ထောင်ခဲ့ပြီး အဓိကအားဖြင့် စိုက်ပျိုးရေး ထွက်ကုန် များ ကိုအခြေခံသည့် e-commerce ကုမ္ပဏီ အဖြစ်သို့ပြောင်းလဲ ရန်ရည်ရွယ်သည်။ ပလက်ဖောင်း သည် လယ်သမားများ နှင့် စားသုံးသူ များကို ချိတ်ဆက် ရန် ပလက်ဖောင်း တစ်ခုအနေဖြင့် တစ်နိုင်ငံလုံး ရှိ လယ်သမားများ အတွက် တန်ဖိုး မြှင့် ဝန်ဆောင်မှုများကို လည်း ပေးသည်။ ဒေတာ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု ပလက်ဖောင်း NewRank ၏အချက်အလက် များအရ Dongfang Zhen သည် ဒီဇင်ဘာ ၂၈ ရက်တွင် စတင်တည်ထောင် ချိန် မှစ၍ စုစုပေါင်း ရောင်းအား ယွမ် ၄. ၅၄ ၇၆ သန်းနှင့် ထုတ်ကုန် ၈၁, ၄၀၀ သာ စုစုပေါင်း ရောင်းအား ၃၃ ၅ ခုကို ရွေးချယ်ခဲ့သည်။
Yu Minhong က ဖေဖော်ဝါရီ ၂၂ ရက်တွင် ဤသို့ရေးသား ခဲ့သည်-“ယခုအပတ် တွင် ကျွန်ုပ်တို့သည် ကုမ္ပဏီ အတွင်း စီးပွားရေးလုပ်ငန်း ဆိုင်ရာ အစည်းအဝေး ၈ ခုကို ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး အတိတ် ကိုပြန်လည်သုံးသပ် ရန်နှင့် အနာဂတ် ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှုများ ကိုစဉ်းစား ရန်ဖြစ်သည်။ အသစ်နှင့် အသွင်ပြောင်း စီးပွားရေးလုပ်ငန်း များအားလုံးသည် ကန ဦး အလုပ် များသော ကာလ ကိုဖြတ်သန်း ပြီးနောက် တစ်ဆင့် ပြီး တစ်ဆင့် တိုးတက် လာခဲ့ပြီး အချို့သည် အစောပိုင်း ရလဒ်များကို တွေ့မြင် ခဲ့ရသည်။ New Oriental မှ အလုပ်သမား များသည် အရှုံး နှင့် ၀ ယ်ယူ ရန် ရဲစွမ်းသတ္တိ ရှိပြီး အခွင့်အရေး တိုင်း ကိုအသုံးချ ရန် စိတ်ဓာတ် ရှိသည်။ သူ တို့နှင့်အတူ New Oriental သည် ဆက်လက် ဖွံ့ဖြိုး နိုင်သည်ဟု ကျွန်ုပ် ယုံကြည်သည်။ “
Oriental DFUB မွ ပိတ္ထားသည့္ ၁၂ တန္းေက်ာင္းသားေလးအား က်ဴရွင္
တနင်္လာနေ့က တရုတ်မီဒီယာအများအပြားက သတင်းဖော်ပြချက်အရ အရှေ့တိုင်းပိုင် Dufu Bo ဟာ သူ့ရဲ့ ၁၂ တန်းကျောင်းသားကျူရှင်လုပ်ငန်းကို ပိတ်ပစ်ဖို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
Industry Sep 13 စက်တင်ဘာ 14, 2021
တရုတ္ပညာေရးကုမၸဏီႀကီးျဖစ္သည့္ New Oriental မွ မိဘမ်ားအား သင္တန္းေပးရန္ ျငင္းဆို
ကြာသပတေးနေ့တွင် ကောလဟလသတင်းများ ထွက်ပေါ်နေသဖြင့် အရှေ့တိုင်းမှ သစ်များကို မိဘများထံသို့ အလှည့်ကျ သင်တန်းများ စတင်ပေးနေပြီဖြစ်သည်။ ကုမ္ပဏီဝန်ထမ်းတွေဘက်ကလည်း တရုတ်ငွေချေးလုပ်ငန်းဌာနမှာ အခုလို ကောလာဟလ သတင်းတွေထွက်နေတာဟာ အထင်အမြင်လွဲမှားစရာဖြစ်တယ်လို့ သတင်းထောက်တွေက ပြောပါတယ်။
Industry Aug 12 ဩဂုတ် 13, 2021
ဘ႑ာေရးႏွစ္ ဒုတိယသံုးလပတ္ အစီရင္ခံစာထုတ္ျပန္ရန္ စီစဥ္ေနဟု ဦးႀကီးျမင့္က အသက္ေမြး၀မ္း ေက်ာင္းပညာဘက်ကို
ဘေဂျင်းအခြေစိုက် ပညာရေးလေ့ကျင့်ရေးအင်စတီကျု့ High Common Group က ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ကထုတ်ပြန်တဲ့ ဒုတိယသုံးလပတ် အစီရင်ခံစာအရ ၂၀၂၁ ခုနှစ် ဇွန်လ ၃၀ ရက်နေ့ အထိ ဝင်ငွေရရှိမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Industry Sep 23 စက်တင်ဘာ 23, 2021
Industry Sep 26 စက်တင်ဘာ 27, 2021